Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay oo booriyay habsami u socodka hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda ee Puntland, oo haatan ay diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka socoto degmooyinkii ugu horeeyay ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay Puntland deeqdo, sharafna u tahay, iyadoo ay dadkeeda soo doortaan madaxdii hoggaamin laheyd.
“Hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda, Puntland waxay u tahay Sharaf, waxaa nagu filan in dadka reer Puntland ay madaxdooda doortaan, intaasi ayaa anaga waxay noo tahay wax weyn.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo soo duubay muuqaal uu dadka reer Puntland kula hadlayay, isagoo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Deni ayaa Ururada Siyaasadda iyo shacabka reer Puntland ugu baaqay in qof kastaa uu doorkiisa ka qaato hirgelinta nidaamka dimoqraadiyadda ee Puntland.
Dhanka kale Madaxweyne Deni ayaa u hambalyeeyay ardayda Puntland ee Sabtidii u fariistay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadka dugsiyeedka 2020/2021, isagoona Wasaaradda Waxbarashada iyo masuuliyiinta kalaba ku ammaanay inay ardaydu gelayso imtixaanaadka, xilli dunida uu ka jiro xanuunsidaha COVID-19 ee fayriska Corona uu keeno.
Deni ayaa tan iyo Jimcihii ku sugan Magaalada Muqdisho, iyadoona uu kaga qaybgelayo Shirka Wadatashiga Qaran, ee lagu dhameystirayo hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka dalka.
Previous articleXasan Sheekh oo ka hadlay Shirka Wadashiga Qaran ee Muqdisho ka socdo
Next articleQoorqoor oo la kulmay Safiirka Talyaaniga ee dalka u joogga (SAWIRRO)